Anụ anụ ọhịa na-agba | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Anụ anụ ọhịa na-agba
Rabbit French sheep: ozuzu na ulo
A oke bekee bu obere anu ndi nwere ike ichota n'oru nke anu ulo. N'ime ikike a, ụdị nke ụdị rabbits, nke French (ma ọ bụ nkedo elu), gosiri onwe ya nke ọma. Anụ anụmanụ ahụ nwere ọdịdị mara mma, njirimara dị jụụ, ọ dịghịkwa mkpa nnukwu ụgwọ ọrụ.
Ekepịa Hyplus: esi elekọta na otu esi eri nri n'ụlọ
Otu n'ime ugwo uru taa bu oke ozuzu oke ohia. Ụlọ ahịa ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu, n'ihi na ọ bara uru ma anụ na anụ anụ. Otu n'ime anụ ahụ na-azụlite, mana kama anyị ga-atụle Hyplus na-agafe agafe na isiokwu a. Nkọwapụta na Atụmatụ Na - ahụkebe Ihe dị iche iche nke ụdị ngwakọ ọ bụla bụ enweghị ike ịmị mkpụrụ, ma ụmụ nwanyị Hyplus na - emegharị ka ha bụrụ ụmụ ahụhụ.
Ụdị nke rabbits na-eto ngwa ngwa: broilers
Ndị ọrụ ugbo na-akpọkarị brops ụdị nke rabbits kacha mma, n'ihi na ụmụ anụmanụ ndị a na-amịpụta ọtụtụ anụ. Taa, anyị ga-ekwu maka uru nke ịzụlite rabbits dị otú ahụ, ụdị ntụrụndụ ha na ihe ndị dị na ha. Uru nke nzụlite broits rabbits Na-eto eto broiler, ma ọ bụ, dị ka a na-akpọkwa ha, anụ rabbits nwere ọtụtụ uru ndị dị otú ahụ: ezi ọmụmụ - nwanyị na-emekarị weta rabbits 7 ruo 9; na ngwangwa ngwa ngwa nke mkpụrụ, na-eru ogo na ibu site na ọnwa anọ; rabbits nwere ezi mmuo nke ọma, nke a na - azụlite ndị na - eto eto n'enweghị ihe isi ike; ikike iji oke rabbits na-eto eto na-enwe mmekọahụ, n'agbanyeghị oge ahụ; ihe gbara mgbagwoju anya - ha nwere ike itolite n'ime mkpụrụ ndụ ntupu; obere oriri oriri, n'ihi na iji naanị kilogram 2.5 nke nri, ị nwere ike nweta 1 kilogram nke ịdị ndụ nke oke bekee.
Oke oyi na-acha ọcha pannon: ozuzu, na-elekọta na nri
N'etiti ụdị ụdị anụ ụlọ ọ bụla, ihe na-acha ọcha na-apụta ìhè maka oke arụpụta ihe na arụpụta ihe kachasị mma. Nke a bụ ụdị ntụziaka nke anụ, nke, na nlekọta kwesịrị ekwesị, ga-eme ka ị nweta anụ dị mma ma dị nro n'ụdị buru ibu. Akụkụ nke ọdịnaya nke rabbits dị otú ahụ, anyị na-atụle n'isiokwu ahụ.
Otutu ugbo ala ndi ozo na ugbo ndi ozo bu uzuzu umu anu. Maka alaka ụlọ a nke anụ ọhịa, àgwà nke azụ ahụ dị oke mkpa dị ka uru bara ụba. Ihe onwunwe a zuru oke site na ngwakọ French ụdị nke rabbits, chicol. Nkọwa na njirimara nke ụdị ngwongwo a na-eme ka ọ bụrụ uru dị arọ, ya mere, ihe mgbaru ọsọ nke ịzụlite rabbits bụ anụ ndị na-edozi ahụ.
Esi na-eto rabbits maka anụ
Ihe egwu a maara nke ọma banyere "ọ bụghị nanị aji aji bara uru, ma ihe abụọ ma ọ bụ atọ kilogram nke anụ" abaghị uru. A na-ata ezigbo oke bekee maka ma ị nweta akpụkpọ anụ, nakwa maka inweta anụ nri dị nro. Ugbo ahihia adịghị dị ka anụ dị ka anụ, ya mere n'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya anụ anụ.
Nkọwa na njirimara nke ọdịnaya nke rabbits nke onye na-ewu ụlọ
Iji nwee rabbits, nke mbụ, ọ dị mkpa ka ị mara onwe gị na iwu nke nlekọta ha, ihe oriri, nlekọta na ịzụlite. Nhọrọ nke oke bekee na-adabere n'ebumnuche nke ịzụta ya. N'isiokwu a, anyị ga-atụle atụmatụ na iwu nke ịzụlite German Motley Giant breed. Isi mmalite nke German dị iche iche dị iche iche, nru ububa German, onye na-ewu ụlọ na ọtụtụ aha ndị ọzọ nwere ụdị a.